ခရီးဆုံးအထိ – Grab Love Story
ဆရာမမြသီတာ…. ရုပ်ရည်လေးက တော်တော်လှသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တင်းအချိုးကျ၍ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း ကြော့ရှင်းလှပသူဖြစ်ကာ အိုးလည်း တော်တော်တောင့်တာမို့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ယောက်ျားသားတို့၏ အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရသည့် မိန်းမချောတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး လင်ရှိမယားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ သူမယောက်ျားမှာ နိုင်ငံခြားပင်လယ်ကူး သဘောင်္သားတစ်ယောက်ဟု သိရသည်။ သူမမိဘတွေကကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပြီး မိခင်ဖက်မှဆွေမျိုးတော်စပ်သည့် အဒေါ်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်နှင့်အတူ နေထိုင်ကာ သူမလက်ရှိအလုပ်အကိုင်ဖြစ်သော စာသင်ပြသည့်အလုပ်ကိုပင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ သူမမိဘတွေက ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေပီပီ သမီးဖြစ်သူ၏နောင်ရေးအတွက် စိတ်အေးရအောင်ဆိုပြီး သူမကို သူတို့နှင့်ရင်းနှီးခင်မင်သည့် လူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းထဲက သူဋ္ဌေးသား တစ်ယောက်နှင့် စောစီးစွာနေရာချထားပေးခဲ့သည်။ သူမအသက် ၂၅ နှစ်လောက်မှာ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျခဲ့သည်။ ယခုဆိုလျှင် သူမအိမ်ထောင်သက်က ၅ နှစ်ကျော် ၆ နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီ။ မြသီတာမှာ လူတွေအမြင်မှာ တည်ငြိမ်အေးဆေးပြီး ဣနြေ္ဒသိက္ခာနှင့်ပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်သည် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမတို့မြို့ရှိ အောင်ချက် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းမှ ဂုဏ်သရေရှိ အထက်တန်းပြကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၍ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် မှလည်း သူမကို မလေးမစား မလုပ်ဝံ့ကြချေ။ ယောက်ျားဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားသင်္ဘော လိုက်ရာက ပြန်လာချိန်များမှာ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် တစ်ပတ်ကိုးသီတင်းလောက် အတူတကွ လည်ကြပတ်ကြ စားကြသောက်ကြ ကမ်းခြေသွားအနားယူကြနှင့် အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံပြီး အများအားကျဖွယ် ကောင်း၍ ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်သည့် မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
လှတုန်းပတုန်း အရွယ်လည်းကောင်းတုန်း သားထောက်သမီးခံလည်းမရှိကြသေးတာမို့ သူမတို့နှစ်ယောက်၏ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပျော်ရွှင်စရာအတိပြီးပြည့်စုံပြီး ချစ်ပြီးရင်းသာ ချစ်လို့မကုန်နိုင်အောင်ဘဲ ရှိနေလေတော့သည်။ သူမယောက်ျား ကိုဇော်လင်းနောင်မှာ သူမထက် အသက်ဆယ်နှစ်နီပါးကြီးပြီး သူ့မိဘတွေဖက်ကလည်း မျိုးနှင့်ရိုးနှင့်ချမ်းသာသူတွေဖြစ်ကြလေရာ နယ်ခံမိတ်ဆွေများနှင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖက်စပ်ထူထောင် လုပ်ကိုင်ထားပြီး ချစ်ဇနီးလေးကို သာမန်အထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာမအလုပ်ကို မလုပ်စေချင် သော်လည်း မြသီတာက လင်ဖြစ်သူ ပင်လယ်ရပ်ခြားထွက်ခွာစဉ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာထိုင်မနေလို ဟုဆိုပြီး ခေါင်းမာမာနှင့်ပင် ဆရာမအလုပ်ကနေ မထွက်ဘဲ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေခဲ့သည်။ စာအသင်အပြ ကောင်းသူလည်းဖြစ်၍ တပည့်လက်သားတွေကြားမှာ နာမည်ကောင်းရသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဇော်လင်းနောင်နှင့်သူမမှာ ဘဝကို ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံချင်း မတူကြဟု သူမထင်သည်။ လူတွေအမြင်မှာ တင့်တယ်ပြီး အပြစ်ဆိုစရာမရှိလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်း လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ မတူညီသည့် ခံယူချက် အတွေးအမြင်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးရှိနေပေသည်။ အဓိကအချက်မှာ အသက်အရွယ်နှင့်ဖြတ်သန်းပုံချင်း ကွာခြားမှုရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဇော်လင်းနောင်က အေးအေးဆေးဆေးနေသူဟုထင်ရပေမယ့် ကုပ်ကမြင်းသမား။ ကဇော်ကြိုက်လွန်းတာရော အပေါင်းအသင်းမက်ပြီး အချိန်ပြည့် ပျော်ပါးသောက်စားကာ တစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက်အထိ အိမ်မကပ်ဘဲ သွားချင်ရာလျှောက်သွား၍ ဘဝကို ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပုံစံမျိုး နေထိုင်လေ့ရှိတတ်တာကို သူမအနေနှင့် လုံးဝကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပေ။ မတူညီသည့် နောက်အချက်တစ်ခုမှာ သူမတို့နှစ်ယောက်၏ အိပ်ခန်းထဲမှဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ လူတွေထင်သကဲ့သို့ အဆင်ပြေပြေရှိလှတာမဟုတ်ဘဲ သူမ၏တက်ကြွထက်သန်လွန်းသည့် အလိုဆန္ဒနောက်ကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇော်လင်းနောင်တစ်ယောက် ပြည့်ပြည့်ဝဝ လိုက်ပါဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုက ကြီးမား၍ လုံးဝဖြေရှင်းမရနိုင်သော ပြဿနာတစ်ခုပင် ဖြစ်နေပေသည်။ မြသီတာ အလိုရမ္မက်ကြီးသည်။
ဟုတ်သည်။ အသက်ချင်းကွာတာကြောင့်လား မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ပဲလား ဣတ္ထိယခေါ်မိန်းမတို့၏ မြင်သာထင်သာမရှိသည့် ထာဝရသိုဝှက်စွာမြုံနေလေ့ရှိကြသော ကာမဂုဏ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပင်ကိုယ်သဘောသဘာဝကြောင့် ပေပဲလားတော့ မသိချေ။ အပြင်ပန်းအားဖြင့်ကြည့်လျှင် မိန်းမတစ်ယောက်၏အတွင်းစိတ်ဆန္ဒကို ခန့်မှန်းသိဖို့ရန် မလွယ်ကူလွန်းလှပါ။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာကြပြီဆိုလျှင် သူတို့၏စိတ်သဘောမှန်ကို ပိုပြီးသတိထားကြရပေလိမ့်မည်။ မြသီတာကဲ့သို့ ကာယိနြေ္ဒကို အထူးတလည်တန်ဘိုးထားသော မိန်းမစားမျိုးမှာ အုံ့ပုန်းသဘောသဘာဝမျိုး ရှိသည်ဖြစ်ရာ အတူနေချိန်သိပ်မရဘဲ မကြာခဏ ဇနီးမယားဖြစ်သူ၏အဝေးမှာနေရသော သူမ၏ ခင်ပွန်းလင် ဖြစ်သူ ဇော်လင်းနောင်အနေနှင့် မယားဖြစ်သူကို လိင်ကိစ္စ၌ စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းလွန်းပြီး မလိုအပ်ဘဲ ရှက်အားပိုလွန်းသည် ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် အိမ်သူသက်ထားဖြစ်သော ဇနီးမယားထက်ကို ကေတီဗွီမာဆတ်ကဲ့သို့သော ပြင်ပအပျော်အပါးဋ္ဌာနများဆီသို့သာ အာရုံကျက်စားလျက်ရှိနေပြီး အိမ်ကိုလည်း သိပ်မကပ်သဖြင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နားလည်မှုချင်း ပို၍ပင် လွဲမှားလာကြရတော့သည်။ မျိုးရိုးနှင့်ဂုဏ်ဒြပ် အဆင့်အတန်း မြင့်မားသူချင်းမို့ လင်နှင့်မယား ကတောက်ကဆ ဘုဘောက်ကျကာ အတိအလင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ရန်ဖြစ်ခြင်းမရှိသော်ငြားလည်း အတွင်းစိတ်အရတော့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ကြိတ်ပြီး တအုံနွေးနွေး အစာမကြေနိုင်ကြဘဲ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဆက်ဆံရေး အက်ကြောင်းထင်လျက် ရှိကြလေတော့၏။ လင်နှင့်မယား တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဝတ်ကြေတန်းကြေ သဘောမျှရှိပြီး မြသီတာလည်း မိမိအလုပ်ကိုသာ အာရုံစူးစိုက်လျက် စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်းမရှိအောင် ကြိုးစားထိန်း နေရလေသည်။ သူမအလုပ်ထဲက ဆရာမတွေထဲမှာလည်း ညီအစ်မအရင်းတမျှ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတွေရှိကြလေရာ အထူးသဖြင့်တော့ အသက်အရွယ်ချင်း မတိမ်းမယိမ်းလည်းရှိ တစ်တန်းတည်းစာပြသူတွေလည်းဖြစ်ကြသည့် ဆရာမသိင်္ဂီစိုးနှင့်ခင်မာလာဆွေတို့ကို သူမအိမ်ထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် မကြေမလည်ဖြစ်နေသော ခံစားချက်ဝေဒနာအချို့ကို ရင်ဖွင့်ပြလေ့ရှိခဲ့သည်။
“သိင်္ဂီစိုး”…. သူမလည်း အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်သည်။ သူမယောက်ျားက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ မှုခင်းဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိ (ဒုရဲအုပ်) တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားက ဒီနယ်မှာ တာဝန်ကျရင်း သူမနှင့်တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်ကာ ညားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာ အလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေလျှက်ရှိပြီး နှစ်လသုံးလနေမှ တစ်ကြိမ်ခန့်သာ အိမ်ပြန်နိုင်သူဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်သည်လင်ရှိမယားပီပီ အပြောအဆို အနေအထိုင် ပွင့်လင်းရဲတင်းသူဖြစ်ပြီး လင်နှင့်မယား တစ်နေရာစီအဝေးမှာ ခွဲနေရခြင်းဖြစ်၍ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နှင့် ပတ်သက်သော ကာမကို အမြဲတစေ ဆာလောင်နေတတ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလို့သာ ဆိုရမည်။ သူမနှင့်မတွေ့လိုက်နှင့် တွေ့ပြီဆိုတာနှင့်ပင် ဖိုမဆက်ဆံရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လိင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားများနှင့် သူမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေ အရပ်ရပ်အနယ်နယ်က ကာမဂုဏ်နှင့်ဆက်နွယ်သည့် ထူးပေ့ဆန်းပေ့ဆိုသော ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်တွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ တစ်တစ်ခွခွ ပြောဆိုပေတော့မည်။ “ခင်မာလာဆွေ” သူမကျတော့ အိမ်ထောင်လက်ရှိမဟုတ်ဘဲ လင်နှင့်ကွဲနေသည်။ သူမကျောင်းနေစဉ် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လောက်ကတည်းက ယောက်ျားသနာတွေနှင့်အတွေ့အကြုံတွေ တစ်လှေကြီးရှိခဲ့ပြီး လင်ရှိအချိန်တွင် လင်နှင့်လည်းကွဲကာ ဖိုမသံဝါနွှဲပျော်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လင်ဆာ(လီးဆာ လီးငတ်သည့်)ဝေဒနာ ခံစားနေရသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပါသည်။ မြသီတာ ဒီသူငယ်ချင်းတွေနှင့်မှ အတွဲငြိငြိတွဲမိခဲ့ကြပါသည်။ ကျောင်းဖွင့်ရက် ဆရာဆရာမနားနေခန်းထဲမှာဆုံကြသလို ကျောင်းပိတ်ရက်တွေကျပြန်လျှင်လည်း တစ်ယောက်အိမ်တစ်ယောက် အလည်သွားပြီး လက်ဖက်သုတ်စား ရေနွေးကြမ်း ဒါမှမဟုတ် ကိုလာအအေး သောက်ရင်း စကားဖောင်ဖွဲ့ပြောမကုန်အောင်ဘဲ ရှိကြလေသည်။ မြသီတာယောက်ျား ကိုဇော်လင်းနောင်က ဒီရက်ပိုင်းလောက်မှာပဲ သင်္ဘောပြန်တက်ရမည်ဖြစ်၍ သူမနှင့်အတူ တစ်ညအိပ်ပြီး ရန်ကုန်ကို စတင်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။ “ကိုကိုက ခပ်ကြမ်းကြမ်းကလေး နှုတ်ဆက်မသွားဘူးလား သီတာ ” “အောင်မယ် ဝေးသေး သူကြမ်းတာများ ဖြုတ်ကိုက်သလောက်မရှိဘူး ရင်တောင်မခုန်” “တစ်ညလုံး ဘယ်နှစ်ချီ ဘယ်နှစ်လားတောင်များ ” မြသီတာ သိင်္ဂီစိုးကို မျက်စောင်းထိုးပစ်လိုက်ရာက သူမနှုတ်ခမ်းကလေးကို စူစူအောင့်အောင့်နှင့် သူမလက်ချောင်းကလေး လေးချောင်းထောင်ပြလိုက်ပြီး … “သိပ် သိချင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား သန်းခေါင်သန်းလွဲ နှစ်ခါ … မနက်လင်းဆွဲ နှစ်ခါ …ဒါ အစွမ်းကုန်ပဲ” “အားပါး … အစွမ်းက တယ်မသေးပါကလား … ဟီးဟီး ခစ်ခစ် … ခွိခွိ ခွိ” သူငယ်ချင်းမနှစ်ယောက် ခွက်ထိုးခွက်လှန် ရယ်ကြသည်။
“ခုတစ်ခေါက် ဘာမှာလိုက်သေးလဲ သီတာ ” “ဘာမှ မမှာဘူး …ပိုက်ဆံမှန်မှန်ပို့ဖို့ တစ်ခုပဲ မှာလိုက်တယ် … လူကပြန်မလာလေ ကောင်းလေ သေခန်းပြတ်လည်း အေးဆေးပဲ ” “တကယ် ” “အင်း တစ်ကယ် ဆယ်ကယ် … ဟင်း …ဟင်း ဟင်းး ” မြသီတာ ထိုအတိုင်းပင် ပြောပြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ချလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းမနှစ်ယောက်ဖြစ်သော သိင်္ဂီစိုးရော ခင်မာလာဆွေပါ သူမစကားကို ပိုးစိုးပက်စက်ပင် ထောက်ခံကြသည်။ ဒါတောင် နှစ်ယောက်လုံး ယောက်ျားမုန်းတီးရေး ဝါဒီများ မဟုတ်ကြဘဲ သိင်္ဂီစိုးက လင်ကြီးငုတ်တုပ်ပင် ရှိနေသေးကာ ခင်မာလာဆွေတစ်ယောက်သာ စမောလေးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဆွဲကာ သူမကိုထားပြီး ထွက်သွားသည့် လင်ဖြစ်သူ ရန်နိုင်အပေါ် ခုအချိန်ထိ အခဲမကြေနိုင်သေးဘဲ ရှိနေလေသည်။ သီင်္ဂီစိုး ပြဿနာတစ်ခုကို အစဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ “ဒီပိတ်ရက် ငါတို့ … ဘယ် သွားကြမလဲ ‘ ရှော့ပင်လား ဘုရားဖူးလား လည်လည်ကြီးလား” အားလုံး နှုတ်ဆိတ်သွားကြပြီး မြသီတာ တွေးတွေးဆဆနှင့် … “ဘုရားဖူးအထိ အကြီးကြီးမတွေးနဲ့ ဟိုဟာမတွေ ညည်းတို့ ရွနေ ထနေကြတာနဲ့ပဲ ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိဿာ …တဲ့ … ကြားကော ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား … ဟွင်း ဟွင်း ဟွင်းး ” သိင်္ဂီနှင့်ခင်မာလာဆွေ မျက်လုံးလေးလုံးစလုံးရဲ့အကြည့်စူးစူးတွေက သူမဆီ ဒိုင်းကနဲ ပြန်လည်ကျရောက်လို့ လာသည်။ “အောင်မာ ငရွမ ငထန်မ …သူမပါတာများ ကျလို့ ” သိင်္ဂီပြန်ပက်လိုက်ပြီး မြသီတာစကားကို တွေးတွေးဆဆလုပ်ကာ သူမခေါင်းလေးတညိတ်ညိတ်ဖြင့် … “အင်း သီတာ ပြောတာလည်း အဟုတ်သား …တခြားဟာတစ်ခုခု စဉ်းစားကြသေးတာပေါ့ကွယ် ခေါင်းတော့ အရှုပ်မခံနဲ့ဦး … ငါ့စကား ငါပြန်ရုပ်သိမ်းတယ် ဒါပဲ … ကဲ ” ခင်မာလာဆွေက သူမဖက်လှည့်ပြီး … “ဘယ်မလဲ သိင်္ဂီမ ညည်း ဟိုအပတ်က ငတိမလေးတစ်ကောင်နဲ့ ရှာခိုင်းမယ်ဆိုပြီး ပြောထားတဲ့အခွေ ” “နင့်ဖုန်း ရှိသားပဲ မာလာရယ် စတိုခန်းထဲက ထုတ်ကြည့်ပေါ့ ” “ဟေ့အေး … အာ့တွေကရိုးဟိုးဟိုးနေပြီ … လိုချင်တာအသစ် …new မှ new … အပ်တူဒိတ် ( up to date )လေး … အားလုံးအတူတူ ကြည့်ဖို့ … ဒါမှ ပိုဖီးလ်တာ … ဟုတ်တယ်မလား … သီတာ ” ခင်မာလာဆွေ သူမဆီလှည့်ကာ စစ်ကူတောင်းလာသည်။
မြသီတာလည်း ပြုံးဖြီးဖြီးနှင့်ပင် … “ဘာမှ အီစီကလီ မနေနဲ့ … သိင်္ဂီရေ … လုပ်လိုက်တော့ …နင့်အိမ် လူအရှင်းသားပဲ ” “ငါ ငါ ရှာမထားမိလို့ ဆောရီး ဆောရီး … သူငယ်ချင်း တို့ …” “ကျွတ် ဒါပဲ …ညည်းကတော့ နို့ဖြင့် … အဟောင်းထဲက အကောင်းလေး ပြန်ရွေးမယ်ကွာ ထုတ်လာလိုက်” “မှန်ဒယ် မာလာရွေးပစေ သူ့ ငမည်းဒစ်လိန်ကြီး ရွေးတော့မှာ မြင်ယောင်သေး အဟေးဟေး ” မြသီတာ ထဖောက်ပြီး ခင်မာလာဆွေကို လက်ညှိုးတထိုးထိုးနှင့်ပြောရင်း သူမဖာသာ သဘောကျ၍ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ အော်ရယ်လိုက်လေသည်။ ခင်မာလာဆွေ သူမကို ပျစ်ပျစ်နစ်နစ် အသံတိတ် ဆဲပစ်လိုက်သည်။ တကယ့် ပြောမနာဆိုမနာ သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်တွေ မဟုတ်လား။သူမတို့သုံးယောက် ယနေ့ခေတ်စားပြီး လူငယ်လူကြီးမရွေး ဖုန်းထဲကနေ တိတ်တိတ်လေး ခိုးကြည့်လေ့ ရှိကြသည့် အိတ်တင်းပလပ်စ် ဟုခေါ်သည့် အပြာကား စုကြည့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သက်တူရွယ်တူ ဖြတ်သန်းပုံချင်း သိပ်မကွာကြ၍ သဘောချင်းမျှ ရင်ဘတ်ချင်း ထပ်တူကျကြသူတွေ ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံပုံအမျိုးမျိုးကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် အသားပေးပြသလေ့ရှိသည့် အဆိုပါ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုကားများ ထဲမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေက သူမတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြစ်တည်နေလျက်ရှိသည့် ကာမဂုဏ် စိတ်ဆန္ဒရိုင်းများကို အတောမသတ်ဖြစ်ပေါ်နိုးကြွလာအောင် အစွမ်းကုန် စေ့ဆော်လှုပ်နှိုးပေးနိုင်စွမ်း ရှိသဖြင့် ရာဂနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ခံစားမှုဖီလင်တွေကို တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးအောင် ခံစားခွင့်ရကာ အချင်းချင်း စလိုက်နောက်လိုက် ပွတ်လိုက်ကိုင်လိုက်ဆွလိုက်နှင့် စိတ်ထဲမရိုးမရွ ဏှာတကြွကြွဖြင့် အပျင်းလည်းပြေ ရမ္မက်အာလျလည်းဖြေဖျောက်ရင်း အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိဖြစ်နေကြတော့သည်။ လူဖြူ လူဝါ လူနီ လူမည်းကပ္ပလီ စသည်တို့၏ ဒေါင်ဒေါင်မြည်အောင်မြင်လှသော စံချိန်မီတုတ်ငပဲကြီးများအား ကြည့်ကာ သူငယ်ချင်းမသုံးယောက် အပြတ်ကို ဏှာထန်နေကြလေသည်။ လိင်တူလိင်ကွဲယောက်ျားမိန်းမ ဝမ်းဘိုင်ဝမ်း တူးဘိုင်ဝမ်း သရီးဆမ်း ဖိုးဆမ်း ဝက်ဝက်ကွဲ ကာမဆက်ဆံကြတာရော လိင်တူမိန်းမချင်း ပွတ်ကြကိုင်ကြတာရော လိင်ချောင်းအတုကြီးတွေနှင့် ကမ်းကုန်အောင်ဆော်ကြတာတွေပါ အစုံအလင် တစ်ခွေပြီးတစ်ခွေ ဖွေရှာကြည့်ကြရင်း တစ်နေကုန်၍ လူတွေလည်း ဖတ်ဖတ်မောကာ ဒူးတွေပါချောင် ကုန်ကြတော့သည်။
“ငါ့ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး မိန်းမ အခန်းထဲသွားရအောင် ” သိင်္ဂီစိုး သူမနားနားကပ်၍ခေါ်လိုက်သည်ကို မြသီတာ မသိမသာခေါင်းညိတ်လိုက်ရင်း သူမအနောက်ကနေ အပေါ့အပါးသွားမလိုနှင့် ထလိုက်လာပြီး သိင်္ဂီစိုးအိပ်ခန်းဖက်ကို အသာလျှောက်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲကို လှစ်ကနဲဝင်ပြီး တံခါးပြန်ပိတ်ထားလိုက်သည်။အပြင်မှာ ခင်မာလာဆွေတစ်ယောက်တည်း သူမအကြိုက်ကပ္ပလီနှင့်လူဖြူမအတွဲ ပက်ပက်စက်စက် ကာမပွဲဆင်နွှဲနေတာကို ကြည့်ရင်း ကျန်ခဲ့သည်။ မာလာဆွေထက်စာလျှင် မြသီတာနှင့်သိင်္ဂီစိုးက အရင်တစ်နှစ်ကျော် လောက်ကတည်းက သူတို့ချင်း နီးစပ်ပတ်သက်မှုတွေရှိခဲ့သည်။ မိန်းမသားချင်း နှုးကြကိုင်ကြ ဘာညာသာရကာ လုပ်ဖူးခဲ့သူတွေဖြစ်သည်။ မြသီတာလှသလို သိင်္ဂီစိုးကလည်း အသားဖြူဖြူဝင်းဝင်း ဖောင်တောင့်တောင့် ထွားထွားအိအိ မှိုစို့မျှစ်ပေါက်ကြီးနှယ် တစ်တုံးတစ်ခဲကြီးဖြစ်နေကာ အင်္ကျီအဝတ်အစားချွတ်လိုက်လျှင် ရေဆေးငါးကြီးတစ်ကောင်လို မြင်ရသူတိုင်း၏ရင်ကို ပူလောင်ဆူပွက် စေနိုင်စွမ်းသည့် ရာဂနိုးကြွစေသော အလှပိုင်ရှင် မိန်းမချောတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ခင်မာလာဆွေက အသားအရေ အညိုဖက်လုသည်။ ကုလားဆင်မလေးဖြစ်ပြီး မျက်လုံးမျက်ဆံကောင်းကောင်း နှာတံပေါ်ပေါ် နှုတ်ခမ်းပါးလေးနှင့် သူမကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း သူတို့နှစ်ယောက်လိုပင် အချိုးအစား ပြေပြစ်ကျန တောင့်တင်းဖွံ့ထွားသည့် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်ကိုပိုင်ဆိုင်သူ မိန်းမလှလေးတစ်ဦးပင်။ ကိုယ်လုံးလေးက ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးလို့တောင် တင်စားခေါ်ဆိုနိုင်သူဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်သား အပေါ်ယံ အပရိကလောက်သာ ကိုင်ဖူးပြီး အတွင်းကျကျ ပတ်သက်ဖူးခြင်းမရှိသေး၍ မြသီတာလည်း ခင်မာလာဆွေနှင့်ဇာတ်လမ်းစဖို့ကို ရှိန်နေသည်။ သိင်္ဂီစိုးရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တော့ သူမက မြသီတာကိုအသင့်စောင့်နေဟန်ဖြင့် အခန်းဝကနေဆီးကြိုနေပြီး မြသီတာခါးလေးကို သူ့လက်တစ်ဖက်နှင့် လာရောက်ပွေ့ဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်၍ အနမ်းပေးနေလေသည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း မြသီတာ၏ရင်သားထွားမို့မို့အစုံကို လာရောက်ဆုပ်ညှစ်ချေနယ်ပေးလာသည်။
“နင် အရမ်းထန်နေပြီ ကောင်မရယ် ” မြသီတာက သူမပုံစံကလေးကြည့်၍ ခပ်ညည်းညည်းကလေးပြောလိုက်ရာ … “ထန်လွန်းလို့ ခက်နေတာပေါ့ သီတာရယ် ယောက်ျားနဲ့ မလိုးရတာလည်း ကြာပြီ နင်ကမှ ငါ့ထက်စာရင် ပိုဇိမ်ကျလိုက်သေး’” “ဟင်းဟင်း ဒါ နင့်အထင်လေ လင်တစ်ယောက်ရတာ ပိုက်ဆံရှာတာက ထားလိုက်တော့ …အိပ်ယာထဲမှာ အသုံးမှမကျတာ … လီးလေးက ပိန်ရှည်ရှည် လက်တောက်လောက်နဲ့ အယားတောင်ပြေတာမဟုတ်ဘူး ငါကြိုက်တာ ဟိုကားထဲက နီဂရိုးလီးကြီးလိုမျိုး လီးတုတ်တုတ် ရှည်ရှည်တွေမှ ကြိုက်တာ … တရားလွန် မဟုတ်တောင် စံချိန်မီ ၈ လက်မလောက်ဆိုရင် စောက်ပတ်ကွဲအောင် ကော့ခံပစ်လိုက်ချင်သေးတယ် ဟင်း ဟင်း … သူနဲ့စာရင် လမ်းဘေးက ဂျလေဘီတစ်ကောင် ခေါ်လိုးခိုင်းရင်တောင် သူ့ထက် အပုံကြီးသာချင် သာနေလိမ့်မယ် ယုံလိုက် သိင်္ဂီ” မြသီတာ သူမရင်တွင်းခံစားချက်ကို ထုတ်ပြောသည်။ တကယ်လည်း သူ့ယောက်ျား ဇော်လင်းနောင်လီးက လီးနံပိန်ကလေး အရှည် ၆ လက်မသာသာလောက်ရှိပေမယ့် အိမ်ထောက်သက် တစ်နှစ်ကျော်လောက် ရလာကတည်းက သူ့လီးက လိုးရင်းနှင့်ချောင်ချောင်ချိချိဖြစ်လာပြီး အားမရသလိုကြီး ဖြစ်လာသည်။ ကိုယ်က ဆရာမ ဆိုတော့လည်း တခြားမိန်းမတွေလို မလွတ်လပ်တာမို့ ကိုယ့်ဖာသာ နှုတ်ခမ်းနီတောင့်တို့ ခရမ်းသီးတို့ ထိုးရင်း အာသာဖြေလိုက် အချင်းချင်း ပွတ်လိုက်နှိုက်လိုက်လုပ်ပြီး ကာမအကြောလေးလျှော့လိုက်နှင့်သာ ရသေ့စိတ်ဖြေ နေနေရသည်။ “နင့်လူကြီးရော ဒီအပတ် ပြန်မလာဘူးလား ” မြသီတာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို စကားနှိုက်လိုက်တော့ သိင်္ဂီစိုးလည်း မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့ဖြင့် … “ဟင်း အဲဒီလို ခံစားရတာ ညည်းတစ်ယောက်တည်းများ ထင်နေလို့လား မိန်းမရဲ့ကျုပ်အကောင်ကြီးလည်း လူကောင်ကြီးကြီး ဗိုက်သာရွှဲနေတာ …ညောင်ကြီး အသီးသေး မောင်ကြီးတော့ လီးသေး ဆိုတာလိုပဲ ဗလကြီးတိုင်း ဟိုဟာကောင်းတာမှုတ်ဘူး …တိုတိုတုတ်တုတ်ကလေး လိုးရင်လည်း စာကလေးမိတ်လိုက်တဲ့ အတိုင်း တက်ထွက်ကြီး …တက်တာနဲ့ ထွက်ဖို့သာပြင်ထားလိုက် ဟွင်း ဟွင်း … မိန်းမအကြိုက်ဆိုတာ ဘာမှန်း သိတဲ့ကောင်စားမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး … ကျုပ်ကလဲ သားအိမ်ခိုက်အောင် လိုးပေးနိုင်မှကြိုက်တာ … အင်း ပြောစရာတော့ရှိတယ် နင် နှုတ်လုံရင် ငါ ပြောမယ် ” “ပြောစမ်း သိင်္ဂီအထူးအဆန်း သတင်းလေး ” “ငါ တို့ နေတဲ့လိုင်းခန်းနဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်က အရက်ဆိုင်မှာ လာလာထိုင်တဲ့ ဖယ်ရီမောင်းတဲ့ဘဲကြီး နင်သိလား ” “ဘယ်ဘဲတုန်း နင်ကလဲ အများကြီးပဲဥစ္စာ”။
“ဟို အသားညိုညို အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်လုံးတောင့်တောင့်နဲ့လူ ပြောလေ တစ်ခါက ငါ့ကိုကျောင်းလာပို့တာ ” “အော သိပြီ သိပြီ ကျောင်းကြိုကားရော ပရိုက်ဗိတ်တက္ကစီပါမောင်းတဲ့လူ ပြောတာမဟုတ်လား … စတီးဆိုလား စတင်းဆိုလား … အဲဒီလူလား ” “အေး ဟုတ်ပါ့ … ဆလင်း ပါဟဲ့ နင်ကလဲ ” “အင်း …ပြော ပါ ငါနာမည် သေချာမမှတ်မိလို့ … ဘာလဲ နင့်ဇာတ်လမ်းလား ” “အေး တစ်ခါစလိုက်မိတာ ခု ရှင်းထုတ်ဖို့တောင် ခက်နေတယ် ငါ့လူတွေအတွက် အရက်တို့ အမြည်းတို့ သွားဝယ်ပေးရင်းနဲ့ သူနဲ့ နေ့နေ့ညညဆုံနေတာ သူက အမြဲတမ်းဖောက်သည်လေ …လူက တကယ့်ဏှာ အကြီးစား …ထန်လိုက်ပုံများ ပြောမနေနဲ့တော့ …ဘယ်ကတည်းက အကွက်ချောင်းနေသလဲမသိပါဘူး ဘယ်သွားမလဲ လိုက်ပို့ပေးမယ် ဘာညာ သူဝင်လုံးရာကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဟိုနားဒီနားလိုက်ပို့ လမ်းကြုံရင်လည်း သူ့ကားနဲ့ပေါ့ … ကြာတော့ ထိကြငြိကြတော့တာပဲ …သုံးလေးကြိမ်တော့ ရှိပြီ … ငါလည်း အစွဲကြီးစွဲပြီး ရုပ်ပျက်မှာတောင် ကြောက်လာတယ် ဘယ်နည်းနဲ့ ခွာရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ တုတ်ကြီးကတော့ ထည့်လိုက်ရင်ကို အထဲမှာ ပြည့်နင့်နေတာပဲ လက်တစ်ဆုပ်စာ မကဘူး သားအိမ်ထိ ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲပဲ စဖုတ်လည်း ကွဲဖို့သာပြင်ထား …ကိုယ့်လင်တွေနဲ့များ ဆီနဲ့ရေလို ကွာပါ့ကွယ် ဖြတ်ပြီးတော့သာ လဲထားလိုက်ချင်တယ် စမ်းကြည့်ချင်ရင် အချိန်မရွေး လာပြော မယ်သီတာ သိလား… ဟင်း ဟင်းဟင်း” “ဟယ် ကောင်မ …အပုတ်မ … ညည်းတော်တော်စိတ်ပုတ်ပါလား ငါနည်းနည်းကလေးမှ မရိပ်မိဘူး ဘယ်သူ့ပြောသံမှလည်း မကြားဖူးဘူး ” “ကြားလို့ ဖြစ်မလားဟဲ့ ခိုးစားတာပါ ဆို နင်ကလဲ ” “နင်နော် အဆင့်က မြင့်သထက်မြင့်လာပြီ ကုန်းနေတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပလဲ ပြောစမ်း” “သုံးလေးကြိမ် ပါဆို … ဒီတစ်ခါ ခပ်ဝေးဝေးသွားပြီး နှစ်ညသုံးည နှပ်ဖို့အထိ စဉ်းစားထားတယ် ဒါမှ အပြတ်ဖီလင်ယူပြီး ခံစားလို့ ရမှာ … နောက်ပြီး … ဒါမျိုးဆိုတာက …လူအသိခံလို့လည်း မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား သီတာရယ် ” “မှန်တယ် ငါတို့လိုမိန်းမတွေအတွက် ဒါမျိုးတော့ ရှိရမယ် … နင် သွားရင် ငါ့လည်း လက်တို့ဦး ” “ပြောပေးရမလား … ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့ သူနဲ့ … နှစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ့ ” “နင် အဖြစ်ရှိမှပြော ငါက အဲဗားအသင့်ပဲ သီတာတဲ့ လီးကြောက်တဲ့မိန်းမထဲ မပါဘူး ” “စောင့်နေ …ကောင်မ ငါခေါ်တော့မှသာ အင်းလေးအဲလေးမလုပ်နဲ့ ” မြသီတာ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် သိင်္ဂီ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူမပေါင်ခွကြားထဲ ထည့်သွင်းပေးလိုက်သည်။
“စမ်းကျိလိုက် သိင်္ဂီငါ ထန်လား မထန်လား ဆိုတာ …ဟင်းဟင်း …နင့်အပြောနဲ့တင် စိုမနေရင် ကြိုက်သလိုပြော” သူမထမီကြားထဲ လက်လျှိုကာ ပေါင်ခွကြားရှိ ပင်တီပါးကလေးအောက်မှ ဖောင်းအိအိကလေးဖြစ်နေသော အဓိကနေရာလေးကို သူမလက်နှင့် အသာနှိုက်စမ်း ကြည့်လိုက်ရာ မြသီတာ ပြောသည့်အတိုင်းပင် စိုစိစိကလေးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရလေသည်။ သိင်္ဂီထမီလှန်တင်ပေးလိုက်ပြီး သူမ၏အတွင်းခံပင်တီကလေးကို အသာအယာပင် ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်သည်။ မြသီတာလည်း သူကိုယ်ပေါ်မှအင်္ကျီကြယ်သီးများကို တစ်လုံးချင်းဆွဲဖြုတ်နေပြီး အောက်ခံဝတ်ဆင်ထားသည့် ဘရာစီယာကလေးကိုပါ ကြိုးလျှော့၍ ချွတ်ပေးလိုက်ရာ သူမတစ်ကိုယ်လုံးပင် အဝတ်ဗလာကျင်းပြီး မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားရတော့သည်။ ဆက်လက်၍ သိင်္ဂီ့ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို သူမကူချွတ် ပေးသည်။ ဗလာကျင်း၍သွားကြသော သူမတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှစ်ခုကို အမျိုးသမီးချောလေးနှစ်ယောက် အပြန်အလှန်စိုက်ငေးကြည့်ကြရင်း ကိုယ်လုံးနှစ်ခု မျက်နှာချင်းဆိုင် တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်သွားကြရာက သူမတို့မျက်နှာချင်းလည်း ပူးကပ်စွာထိတွေ့မိကြလျက် နှုတ်ခမ်းသားချင်း တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ဖိကပ်နမ်းစုပ်မိသည့် အဆင့်ကို ရောက်ရှိသွားရတော့၏။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” “အင့် အင့် ဟင့်ဟင့် …အဟင်း ဟင်းးး အို့ အ ကျွတ်ကျွတ် ကျွတ် ” “သိင်္ဂီသိင်္ဂီရယ် …ဟင့် ဟင့် ဟင့် ” “အ အ သီ သီတာ နမ်း နမ်းပါ ဦး ငါ့ကို ကြမ်းကြမ်းလေးနမ်း အင့် အင့် အင်းးးး ” မြသီတာ၏ ပေါင်ခွကြားရှိစောက်ပတ်ကို သိင်္ဂီစိုးကုန်းနမ်းပေးသည်။ အိမ်ထောင်သည်ချင်း လင်သားနှင့် အိပ်ယာပေါ်က လိင်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ ရှိသူချင်းဖြစ်၍လည်း ကာမသုခခံစားရာမှာ နားလည်မှုရှိရှိ အပေးအယူမျှ၍ နေကြလေသည်။ သိင်္ဂီစိုး သူမစောက်ပတ်ကို ကုန်းယက်နေရာက မြသီတာ၏ နို့အုံအိအိကြီး နှစ်ဖက်ကို ဖျစ်လိုက်ညှစ်လိုက်နှင့် လှိမ့်နယ်ပေးသည်။ နို့သီးကလေးနှစ်ခုကို ဖျစ်ချေကစားပေးသည်။ မြသီတာလည်း ငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘဲ သူမ၏ကာမဓာတ်နိုးကြွရာ နေရာအနှံ့အပြားကို ပြန်လည် ပွတ်သပ်ဆွနှူး၍ ပေးသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းလည်းစုပ် နို့သီးချင်းထိတိုက်လှုပ်ခတ်ပေးကြရင်း အဖုတ်ချင်းလည်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖိလိုက်ပွတ်လိုက် ဆွလိုက်လုပ်ပေးကြသည်။ စောက်စိချင်း ထိခိုက်ပွတ်တိုက်မိသည့် အခါတိုင်းမှာ ဓာတ်လိုက်သလို ကျင်ကနဲကျင်ကနဲခံစားရသည့် ကာမအရသာဟာ ဘာနှင့်မှမတူဘူးဆိုတာကို သူတို့နှစ်ယောက်တည်းသာ သိနိုင်ပေလိမ့်မည်။
“ချစ်တယ် သီတာရယ် ” “ငါရောပဲ သိင်္ဂီ…နင့်အဖုတ် တအားရွှဲနေပြီဟာ ငါ့ပေါင်ခြံအထိ အရည်တွေ စီးကျနေလိုက်တာ ပေကုန်ပြီ ဟင့်ဟင့် ” “ငါ့ဆီကချည်းပဲပေါ့ ဟတ်လား နင့်စောက်ရည်တွေ ဒီ ဒီလောက် ပွထနေတာ ကောင်မ …နင့်စောက်ခေါင်းက အပျိုစစ်စစ်ကလေးအတိုင်းပဲ အလတ်ကြီးရှိသေးတာ … လက်ညှိုးနဲ့လိုးတောင် စွိကနဲစွိကနဲ နေမှာပဲ … ငါ့ဟာလေးနဲ့ တခြားစီပဲ သီတာရယ်” “လိုးပေး သိင်္ဂီ… လက်နဲ့ အသားကုန်မွှေ့လိုးပေး နင်နဲ့ငါ …တစ်လှည့်စီပေါ့ … ” “အင်း အင်း ငါ ငါ တအားရွလွန်းနေပီ သီတာရယ် …နင် လိုးရင်လည်း ငါ့စောက်ပတ်ကို အတွင်းထဲထိ ရောက်အောင် လက်လှည့်ပြီး ထိုးသွင်းပေး … နင် ခံနိုင်သလောက်တော့ ငါလုပ်ပေးမယ် ” “ဖြေး ဖြေး သိင်္ဂီ…အ အာ … ငါ့ဟာလေး နင့် လောက် မပြဲဘူး … အင့် အင့် ” “စွိ ဖွတ် ဖွတ် … ဇွပ် စွိ စွပ် … ဖွတ် ပြွတ် … ပလွတ် ဖွတ် ဇွတ် ” “ညည်းဟာကြီးက လီးဒစ်ပြဲကြီးနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်လိုးခဲ့သလဲမှ မသိတာ ဟို ဆလင်းဆိုတဲ့ကောင်ကြီး လီးတအားကြီးတာလား ထိပ်ပြဲ ဒစ်ကားကြီးဖြစ်နေလား” “နင်တွေ့ရင်သိမယ် လီးက မဆန့်မပြဲကြီး ဟီးဟီး … ပထမနေ့ကဆို လမ်းတောင် ထွက်မလျှောက်ရဲဘူး သေးပေါက်ရင်တောင် စပ်နေတာ အဟင်း ဟင်း … ဒါတောင် သူ့လီးက နဂိုလီးတဲ့ ဆီအုန်းတို့ ဆီလီကွန်ဘာညာ ထိုးထားတဲ့လီး မဟုတ်ဘူးတဲ့ …သူ့ဘော်ဘော် တချို့ဆိုရင် …လီးမတရားကြီးချင်လို့ ဆေးထိုးတာ လီးတောင်မှ ကွဲထွက်တယ်ဆိုလားပဲ … အပျိုစစ်စစ် ပါကင်စောက်ပတ်တွေသာဆို ထည့်လို့တောင်မဆန့်ဘူး အဝင်တစ်ကြောင်း တည်းနဲ့တင် ပြဲလန်ပြီး ဆေးရုံ သေချာပေါက်ရောက်ရသတဲ့ … အဟင်းဟင်း ဟင်း နင် သိပ်ကြောက်သွားလား သီတာ ” “အိုးး ဝေးသေးး … ကြီးလေ ကောင်းလေ တဲ့ စာဆိုတောင်ရှိတယ် တဖြည်းဖြည်း အကျင့်ရရင် အိုကေသွားမယ် ဟင်းဟင်း ဟင်း” မြသီတာပြောလိုက်ပြီး … ကာမဇောကြွလာသည့်အလျောက် တစ်ယောက်စောက်ဖုတ် တစ်ယောက်နှိုက်ကိုင်၍ အရှိန်တက်သထက် တက်လာကြရာက စစ်စတီနိုင်းပုံစံ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်နေပြီး မြသီတာက အောက်က သိင်္ဂီစိုးကသူမအပေါ်က နေပြီး တစ်ယောက်စောက်ပတ်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပွတ်ကြနှိုက်ကြ ယက်ကြစုပ်ကြနှင့် ထန်ချင်တိုင်းထန်၍ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ အရှိန်မသတ်နိုင်ဘဲ ရှိနေကြလေသည်။
သိင်္ဂီစိုးက မြသီတာ၏စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် သူမလျှာကို အပြားလိုက်လုပ်ကာ အထက်အောက်စုန်ဆန် ယက်သပ်ပေးနေပြီး အစိချွန်တက်တက်ကလေးကို ပြွတ်ကနဲပြွတ်ကနဲစုပ် သွားနှင့်မနာကျင်အောင် ကိုက်၍ကိုက်၍ ဆွပေးသည်။ အိကနဲအင့်ကနဲ သူမနှုတ်မှနေ၍ ညည်းတွားသံကလေးနှင့်အတူ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ယင်တွန့်တက်သွားရပြီး မြသီတာဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး အပေါ်ကိုကြွမြောက်တက်လာရသည်။ မြသီတာကိုယ်တိုင်လည်း အောက်မှနေ၍ သူမမျက်နှာပေါ် အုပ်မိုး၍နေသော သိင်္ဂီစိုး၏ပေါင်ခွကြားမှ စောက်ဖုတ်အုံကြီးကို ပါးစပ်နှင့်နမ်းစုပ် လျှာနှင့်ရစ်ဝိုက် ယက်သပ်ပေးရင်း သူမဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်အကြားရှိ စအိုဝကလေးကိုပါ လျှာနှင့်မထိတထိ တို့ယက် ဆွပေးလိုက်ရာ သိင်္ဂီစိုးလည်း ဖင်ကြီး တဆတ်ဆတ် တုန်လှုပ်ယမ်းခါပြီး အပေါ်ကြွသွားလိုက် အောက်ကို ပြန်လည်နိမ့်ဆင်းလာလိုက်နှင့် ဂဏှာမငြိမ်နိုင်ဘဲဖြစ်နေရလေသည်။ မြသီတာရော သိင်္ဂီစိုးပါ သူမတို့စောက်ပတ်များဆီမှ စောက်ရည်များ အတောမသတ် ရွှဲနစ်စွာ ယိုစီးကျ လာရလေသည်။ အလိုးခံချင်စိတ်နှင့်အတူ စောက်ပတ်ရွလွန်းလိုက်တာလည်း ပြောမနေနှင့်တော့။ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်စောက်ပတ်ကို တစ်ယောက် ပွတ်ကြကိုင်ကြ ဆွကြလုပ်ပေးကြရင်း အပြန်အလှန်ဆိုသလို သူမတို့စောက်ပတ်ထဲကို လက်ချောင်းကလေးများနှင့်အပြိုင်အဆိုင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထိုးနှိုက်ဆောင့်သွင်း ပေးနေကြလေပြီ။ “အ အင့်အင့် ထိ ထိတယ် အ ကောင်း ကောင်းတယ် သိင်္ဂီလုပ် ဆောင့်ဆောင့် မြန်မြန် အင့် အင်း ” “စွတ် ဖွပ် ဖတ် ပြွတ် စွိ စွတ်ဖွတ် ပလပ်ဗွပ် ” “အင့် အိအိ အင့် ငါ့ အထဲကိုလည်း ဆောင့် အင့် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေး မ မညှာနဲ့ သီတာ အ အား ဟား ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် လိုး လိုးပေး သွက်သွက်လေး လိုးစမ်း အ အင့် အင့် ” နှစ်ယောက်သား အကောင်းကြီးကောင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင် သတိမမူမိကြတော့။ မြသီတာ အောက်မှနေ၍ ထွန့်လူးကော့ပျံနေသလို သိင်္ဂီစိုးလည်း ကုန်းကုန်းကွကွနှင့်မချိအောင် ခံစားနေရသည်ပဲ ဖြစ်သည်။ ထိုအခိုက်မှာပဲ … “စောက်ကမြင်းမတွေ နင်တို့ချည်း ကောင်းနေတာပေါ့ ဟုတ်လား” အခန်းဝမှအသံတစ်သံကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံး ရင်ထဲမှာထိတ်ကနဲဖြစ်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရုတ်တရက် တန့်ရပ်သွားရပြီး ပြိုင်တူ ခေါင်းထောင်သွားမိကြသည်။ “မာလာ နင် နင် … “သိင်္ဂီစိုးလျင်သည်။ မြသီတာကို လက်ကုပ်၍အချက်ပေးလိုက်ပြီးနောက် သူမကိုယ်ပေါ်မှနေ၍ အသာ လှိမ့်ဆင်းလိုက်သည်။
မြသီတာလည်း ပါးပါးနပ်နပ်နှင့်ပင် ကုတင်ကနေ လူးလဲထလာလိုက်ပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်ကို အခန်းဝကနေ ကြောင်အမ်းအမ်းနှင့် ရပ်ကြည့်နေသည့် ခင်မာလာထွန်းရှိရာကို သွားရောက်ကာ သူမလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့လိုက်သည်။ သူမကို ကုတင်ပေါ်တွန်းတင်ပစ်လိုက်ရင်း မြသီတာရောသိင်္ဂီစိုးပါ နှစ်ယောက်သား ခင်မာလာဆွေ့ကို ဝင်လုံးကြ ကစ်ဆင်ဆွဲကြနှင့် အတန်ကြာအောင် သုံးယောက်သား ထွေးလားလုံးလားဖြစ်နေကြကာ ခင်မာလာဆွေလည်း သူမခါးမှာဝတ်ဆင်ထားသည့် ထမီအောက်စလွတ်လိုလွတ် အင်္ကျီကြယ်သီးများ ပြုတ်ထွက်၍ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဟင်းလင်းပွင့်လိုပွင့်နှင့် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ကာ နေရလေသည်။ “ဟဲ့ အို အို … အ အရမ်း … အ ရမ်း မလုပ် … လုပ်ကြနဲ့လေ ” “လုပ်မှာပဲ ကောင်မ … နင့် စပတ်တစ်ခုလုံး အရည်ရွှဲနေတာ … ငါတို့ကို ညာလို့မရဘူး … လာစမ်း ဒီကို … ဟင်း ဟင်းဟင်း ” “အို ရွှဲပဲ ရွှဲရွှဲ ပြဲပဲ ပြဲပြဲ … ညည်းတို့နဲ့ ဘာဆိုင် လို့ ခိ ခိ ခစ်ခစ်ခစ်” “လာခဲ့စမ်းပါ … အဲဒီ စပတ်အပြဲလေးထဲကို ကိုကို့အလွမ်းပြေလေး လုပ်ပေးမလို့ ဟင်းဟင်း ” “နင် နင် ဘာ လုပ် … အိုးး … သိ င်္ဂိမ … နေုာ် မကဲနဲ့ ဟွန့် … အင် မ မ … လုပ် နဲ့ဆိုနေ … ကျွတ် ဒုက္ဂပါပဲ အ အင့်အင့် ဟင့် ” “မရုန်းနဲ့လေ ငါ အပီ မှုတ် ပေးမလို့ ” “အာ မလုပ် … လုပ် … အ ရှီး အ … ကျွတ် … အ အာ … သိင်္ဂီဟင် … နင် နင်ကလဲ ” သိင်္ဂီစိုးက သူမခါးအောက်ပိုင်းကို ကိုင်သည်။ နယ်သည်။ သူမပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် ဆွဲဖြဲပြီး ပေါင်ခွကြားရှိအဖုတ်ကလေးကို အပီဆွနှူးပေးသည်။ မြသီတာလည်း သူမကိုယ်လေးပေါ် တက်ခွစီးရင်း ခင်မာလာဆွေ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို သူမနှုတ်ခမ်းများနှင့်အတင်းဖိကပ်၍ နမ်းစုပ်လိုက်လေသည်။ သူမရင်သားအုံ အိအိပေါ်က ဘရာစီယာလေးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ရင်း နို့နှစ်လုံးကို အပီအပြင် ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်၍ နို့သီးကလေး နှစ်ခုကို ကုန်းစို့ပေးသည်။ သိင်္ဂီစိုးလက်များက သူမပေါင်ခွဆုံရှိ ဖောင်းမို့မို့ကလေး ဖြစ်တည်နေသော အင်္ဂါဇပ် တစ်ပြင်လုံးကို ကောင်းစွာ ပွတ်ဆွပေးနေပြီး အစိကလေးကို ဖျစ်လှိမ့်ချေကစားလိုက် အခေါင်းပေါက်ကလေး ထဲကို သူမလက်ချောင်းများထည့်သွင်း၍ ထိုးနှိုက်ဆောင့်လိုက်နှင့် လုပ်ပေးနေရာ ခင်မာလာဆွေတစ်ယောက် ချက်ကောင်းထိပြီး သူမနှုတ်မှနေ၍ တအိုးအိုးတအင့်အင့်နှင့် ညည်းသံကလေးထွက်ကာ ကော့ပျံထွန့်လူးစ ပြုလာရလေသည်။
မြသီတာတို့နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်၍ လက်မထောင်ပြလိုက်လေသည်။ သိင်္ဂီစိုး သူမပေါင်နှစ်ဖက်အကြားကို ခေါင်တိုးဝင်လိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်ပေါ်ကို မျက်နှာအပ်ကာ မှောက်အိပ်ချ လိုက်သည်။ ခင်မာလာဆွေ့စောက်ပတ်ဆီမှ ညှီနံ့သင်းသင်းကလေးက သူမနှာဝကို ကလူ၏သို့ မြှူ၏သို့ လုပ်၍နေချေပြီ။ သိင်္ဂီစိုး လျှာကလေးထုတ်ပြီး စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကလေးအတိုင်း အောက်မှနေ၍ အပေါ်သို့ အစုန်အဆန် ယက်သပ်ပစ်လိုက်သည်။ စောက်ရည်ချွဲကျိကျိ အစေးအမြှင်တန်းကလေး သူမလျှာနှင့်အတူ ကပ်ပါလာပြီး အပေါ်ကနေအောက်ကို တွဲလွဲကလေးကျဆင်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အစိကလေးကို သူမပါးစပ်ဖြင့် ပြွတ်ကနဲပြွတ်ကနဲ အသံထွက်အောင် စုပ်ပေးလိုက်ရာ ခင်မာလာဆွေခါးကလေး ကော့၍တက်လာရပြီးနောက် … “အား … အို့ ကျွတ် ကျွတ် …အင့်ဟင့် ဟင့် ” ဟူ၍ သံရှည်ကလေးဆွဲ၍ ညည်းလိုက်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။ “နင် နင် …အဆင်ပြေလား မာလာ ” မြသီတာနားနားကပ်မေးတော့ သူမမျက်စိမှိတ်ထားရာက ခေါင်းကလေး မသိမသာညိတ်ပြရှာသည်။ “ငါ နို့စို့ပေးမယ်နော် ငါ့နို့လည်း နယ်ပေးဦး ” “အင်း အင်း ဟင်း ဟင်း သီတာရယ် ငါ ငါ ဘာဖြစ် ဖြစ်နေ ပြီလဲ မသိတော့ဘူး ” “နင်လည်း အတွေ့အကြုံရှိတာပဲ မာလာရယ် အိမ်ထောင်ကျပြီး လီးနဲ့လိုးဖူးတာပဲ ခု မလိုးရတာကြာရင် စိတ်ထဲက အလိုလိုနေရင်း … ဆာမလာဘူးလား ပြောစမ်း ” “အိုကွာ … နား ရှက် … ရှက် လာပြီ စို့ မြန်မြန်စို့ပေးတော့ ငါ ငါ မ နေနိုင်တော့ဘူး အူး ဟူးး … ” အောက်ကလည်း အဖုတ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးယက်၍ အပေါ်ကနေ မြသီတာက နို့စို့လိုက် ကိုင်လိုက် နယ်လိုက် နို့အုံချင်း နို့သီချင်းခလုတ်တိုက်လိုက် လုပ်ပေးနေရာ သူမ ကြာကြာ ဣနြေ္ဒမဆယ်နိုင်တော့ချေ။ သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲခေါ်ရာသို့ တစ်စတစ်စနှင့် ခရီးဆုံးအထိ လိုက်ပါလာခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသုံးယောက်စလုံး ကုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်အောက် လူးကာလှိမ့်ကာနှင့် ဖီလင်တွေတရိပ်ရိပ်တက်ကာ ဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူကိုင်လို့ ကိုင်မိမှန်းပင် မသိနိုင်ကြတော့ပြီ။ သုံးယောက်သား ရာဂအမှောင်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် စိတ်လိုလက်ရ လိုက်ပါရင်း တစ်နေကုန်ပင် အချိန်တွေ ဖြုန်းပစ်လိုက်ကြလေတော့သည်…ပြီး။